Fedora ine 99% yekuvandudza mapakeji kubva kuPython 2 kusvika Python 3 | Linux Vakapindwa muropa
Fedora ine 99% yekuvandudza mapakeji kubva kuPython 2 kuenda kuPython 3
Kubva Ndira 1, 2020, Python Software Foundation iyo inotarisira kusimudzira, kuchengetedza uye kugadzirisa iyo Python chirongwa chemutauro uye kutsigira uye kufambisa kukura kwenzvimbo yepasi rose yenharaunda yePython vagadziri kupedzisa rutsigiro rwePython 2.7.
Kubva musi iwoyo, Python 2.x haichabatsirike kubva pane chero zvigadziriso, kwete kunyange kubva kuPSF base security fixes, saka kwenguva yakareba yanga ichikurudzira vese vanogadzira kuti vachinjire kuPython 3 panjodzi yekuguma uine zvisinga tsindike Python 2.x matambudziko kana glitches izvo zvinogona kukanganisa ako Python 2-based mapurojekiti.
Zvisinei nenyevero nezvikurudziro zvakapihwa nePSF, pamwe naGuido van Rossum, mugadziri wePython chirongwa chemutauro, mapurojekiti mazhinji achiri kungoenderana neshanduro dze2x dzePython chirongwa chemutauro.
Kune vanogadzira, zvikonzero zvakasiyana. Vamwe vanoti vakagara nhaka kodhi yekodhi yakanyorwa muPython 2 uye kumutsiridza iyo kodhi kwaizoreva kunyorazve zvese, izvo zvingave zvakaoma kuwana.
Kune vamwe, ivo vanoramba vakanamatira kuPython 2 nekuda kwekumwe kunetseka kwavanoti kune vhezheni 3 yemutauro senge kunonoka, kubata mapakeji angave anotyisa, kumisikidza kuitiswa kwe Unicode, nezvimwe. Kune vamwe, ingangove nyaya yekuda, sezvo ivo vachigarika nePython 2 pane Python 3.
Nepo vamwe vagadziri vachiramba vachibatanidza Python 2 muzvirongwa zvavo, Red Hat, iyo inotsigira kugoverwa kweLinux "Fedora" yakanangana nekubvisa mapakeji anoshanda ne Python 2 uye kuti kusvikira zvino zvabatanidzwa muFedora, nekuti kwemwedzi yakati wandei haana kubvisa tsoka yake mukutsimbirira vanogadzira kuti vatamire kuPython 3 uye bvisa iwo ese Python 2-based package.
Uye ndezvekuti mune ongororo ichangoburwa yemapakeji akabatanidzwa mukuparadzira, yaratidza kufambira mberi kukuru kuenda kuchinangwa chekutamira chete kuPython 3.
Muchokwadi, kubva 4324 mapakeji akaongororwa muFedora, 4280 mapakeji anotsigira chete Python 3 nokudaro izvi zvinomiririra 99% chiyero chemapakeji anoshanda chete ne Python 3.
Nezve mapakeji akasara, 10% yeaya mapakeji ayo asati atamira kuPython 3 uye ayo achiri kuwanikwa muFedora, anogona kugoverwa mumapoka akati wandei, pakati pawo ari:
Vaka kutsamira havasati vabatwa nemazvo.
Akaipa akarongedzwa mapakeji
Asiri kushanda mapakeji
Dual Rutsigiro Mapakeji
Python 2 Sheet Subpackages Mapakeji
Zvinoenderana nevachengeti veFedora, 29 mapakeji anoshanda ne Python 2 uye haasati aendeswa kuPython 3. Tichitevera urwu runyorwa, isu zvakare tine matanhatu mapakeji anoenderana ne Python 6 uye Python 2.
Pamusoro pezvikamu izvi zvakasiyana, Fedora vanogadzira vanotaura izvozvo kune mamwe mapoka emapakeji ane chekuita nekuvimbika nekuda kwechimwe chikonzero chekusawirirana kana kutamira kuPython 3 uye vangangoda nechisimba Python 2.7 paFedora 32 kana kupfuura.
Kana pasuru iri mune ino mamiriro, ichada musiyano kubva kuFESCo (Fedora Injiniya Yekutungamira Komiti kana kuFedora Fedora Injiniya Komiti inotarisira maitiro ekugamuchira zvinhu zvitsva, nyaya dzekuchengetedza uye zvimwe zvehunyanzvi nyaya zvine chekuita neFedora kuvaka uye kugovera ) kugara muFedora.
Iwo mapakeji akanganiswa neichi chikamu chekupedzisira ari, pakati pevamwe, iyo Chrome browser, GIMP, iyo PostgreSQL dhatabhesi, PyPy, iyo Sugar desktop nharaunda, nezvimwe.
Nguva Kune vakawanda vagadziri iyi kucheneswa kweFedora kunopfuura kuita kuti uende kumberi, vamwe vashandisi vekuparadzira kweGNU / Linux vanonzwa kuti zvaizokodzera kupa varidzi vemapakeji zvinoenderana nePython 2 imwe nguva yekuvaruramisa panjodzi yekuranga vashandisi vekuparadzira nekubvisa mapakeji akavakirwa paPython 2. x.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve kupatsanurwa kunoitwa pa Python mapakeji muFedora, unogona tarisa chinotevera chinongedzo.
Uye iwe unofunga kuti kumwe kugoverwa kweLinux kunofanira kutora chinzvimbo chakafanana kuna Fedora kana zvasvika pakumanikidza vanogadzira kuti vatamire kuPython 3?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Fedora ine 99% yekuvandudza mapakeji kubva kuPython 2 kuenda kuPython 3
Vhidhiyo Trimmer, cheka mavhidhiyo ako muLinux nenzira inokurumidza uye yakapusa